🥇 ▷ Redmi ayaa xiganeysa Ogosto 16. Kala duwanaansho cusub oo Redmi K20 Pro oo leh 5G iyo 12GB oo RAM ah ayaa laga yaabaa inay jidka soo galaan ✅
Redmi ayaa xiganeysa Ogosto 16. Kala duwanaansho cusub oo Redmi K20 Pro oo leh 5G iyo 12GB oo RAM ah ayaa laga yaabaa inay jidka soo galaan
Tan iyo markii la bilaabay Shiinaha iyo Hindiya, tirada ‘Redmi K20’ ma aysan helin isbeddelo cusub ama waxyaabo la mid ah marka laga reebo kuwa cusub GamePad waxaa soo saaray Black Shark oo la jaan qaada labada nooc ee kala duwan, iyo sidoo kale Xiaomi Mi 9T caalamiga ah. Hadana, iyada oo loo marayo teaser cusub oo xayeysiin ah, shey-hoosaadka ‘Xiaomi sub-brand’ ayaa innaga xigsanaya tan xigta Ogosto 16-keedii ee la xidhiidha ku dhawaaqista wax cusub oo loogu talagalay “Waxyaabaha Dilay Calaamadaha”.
Sida aan ku arki karno khadadkaan, boostada xayeysiiska cusub wuxuu na tusayaa galoofiska feerka ee dabeecadda oo labadaba kor u qaaday Redmi K20 iyo K20 Pro, iyo sidoo kale astaan ​​cusub oo dusha sare ah oo u dhiganta jawiga isboortiga HALKAN KA DHAQANKA.
Gaar ahaan, sidii aan awood ugu yeelan lahayn baaritaanka, HALKAN KA DHAQANKA Waa xarun isboorti oo fadhigeedu yahay Singapore oo laxiriirta xiriirada isboortiga sida Kickboxing iyo fanka dagaal oo isku dhafan. Sidan, ogeysiiskaani wuxuu horseedi karaa heshiis cusub oo la xiriiri doona Xiaomi shirkaddaan isboorti, oo ah urur cusub oo Xiaomi ama kiiskan Redmi uusan helin wax fikrad cusub ah.
Shaati cusub oo ay daabacday Redmi on Weibo,
Redmi K20 Pro oo cusub oo leh 5G iyo 12GB oo RAM ah
Marka lagu daro ogeysiiskaan rasmiga ah ee cusub, wararka xanta ah ee kala duwan waxay bilaabeen inay ku faafiyaan shabakadda ku saabsan jiritaanka cusub Redmi K20 Pro qalabaysan ilaa 12GB oo RAM ah, kaas oo sidoo kale ku dari lahaa Isku xirnaanta 5G.
Wararka xanta ah ee soo baxaya ayaa sii hurinaya hadalada ugu dambeeyay ee uu soo saaray Lu Weibing, Maamulaha guud ee Redmi oo yiri Qorshayaasha shirkad-hoosaadka waxaa ka mid ahaa in la soo saaro qalab cusub oo ku qalabaysan 5G. Intaa waxaa sii dheer, tan waxaa ku darsaday shahaadada TENAA ee noo oggolaatay inaan aragno bishii Maajo ee la soo dhaafay noocyo kala duwan oo ah Redmi K20 Pro oo leh 12GB oo RAM ah oo aan illaa iyo hadda la aqoon.
Si kastaba ha noqotee, wararka xanta ah waa inay ku qabtaan suumanka oo ay sugaan ugu yaraan ilaa tan xigta Ogosto 16-keedii Si looga tago shaki iyo in Redmi ay si rasmi ah u soo bandhigto sheekadaas cusub ee na soo jiidatay.
Xigasho | Weibo, iXBT
redmi Note 8: fiidiyowga rasmiga ah ee fiaser wuxuu cadeeyaa 64MP
Toddobaadka Xagaaga Maamuusta: hirar dhimis laga bilaabo 23 illaa 27 Luulyo HiHonor iyo 30 € tigidh lagu sharfo 10
Sidoo kale marka loo eego Wall Street Journal, 2019 wuxuu arki doonaa Samsung oo la duuban karo (ama xitaa laba)
LG V40 ayaa la soo bandhigay inta u dhaxaysa Note 9 iyo iPhones cusub: miyaanay ahayn oo kaliya 5 kamarado inay kugu yaabin doonaan?
BlackBerry Luna wuxuu noqon lahaa “KEY2 Lite”: sidan ayaa loo sameeyaa iyadoo loo eegayo wax ka qabashada
Xiaomi Mi Max 3 rasmi ah: aad ayey u weyn tahay oo ma ogin inaanu kaniini ugu yeerno (sawirro iyo muuqaallo)